म किन नि: शुल्क काम गर्दछु र Wheaton गलत हुन सक्छ Martech Zone
म किन नि: शुल्क काम गर्दछु र Wheaton गलत हुन सक्छ
शनिबार, अक्टोबर 31, 2015 मंगलवार, नोभेम्बर 3, 2015 Douglas Karr
यो पोष्ट कुनै बहस होईन, र म विल व्हीटन र उसको पोष्टको साथ बहस सुरु गर्न कोशिस गरिरहेको छैन, तपाईं अनुपम प्लेटफर्मको साथ तपाईंको भाँडा तिर्न सक्नुहुन्न र हाम्रो साइट प्रदान गर्दछ। Wil Wheaton एक महत्वपूर्ण निम्नको साथ एक स्थापित ब्रान्ड हो। उनले कडा परिश्रम गरेका छन् आफ्ना दर्शक र समुदायको विकास गर्नका लागि - त्यसैले पुकार्ने मानिस र आफ्नो अडानको साथ सम्झौता।
Wil Wheaton उनको प्रतिक्रिया मा विनम्र थियो। ऊ सार्वजनिक रूपमा गर्न यो पनि हुशार थियो… लिएर दुष्ट, शोषक पूंजीवाद यी दिनहरू सबै क्रोधको विषय हो। तर हामी धेरै जसो Wil Wheaton होइनौं। हामी मध्ये धेरैले हाम्रो पहुँच र श्रोताको वृद्धि गर्न कोशिस गर्दैछौं र त्यो गर्न लगानी गर्न इच्छुक छौं। हफपो जस्ता दर्शकहरूमा पुग्न अवसरहरू छन्, वास्तबमा, लगानी। विज्ञापनको लागि भुक्तान गर्नुको सट्टा, लागत तपाईंको प्रतिभाको केही आपूर्ति गर्न हो।
हामी पहिले त्यो हफिंग्टन पोष्ट भनिने विशाल, पूँजीवादी जनावरको चर्चा गरौं। Martech Zone वर्ष पछि डबल-अंक वृद्धि छ। एक दशक अनलाइन पछि, ब्लगले हाम्रो एजेन्सीमा उत्कृष्ट ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न जारी राख्छ, Highbridge। प्रत्यक्ष राजस्व वृद्धि राम्रो छ, तर जेन (मेरो व्यापार साझेदार) र मलाई थाहा छ कि हामीले ब्लगमा लगानी जारी राख्नुपर्नेछ राजस्व प्रवाह प्रदान गर्नका लागि जुन प्रकाशनका लागि मुनाफा लिन सक्छ।
जब प्रकाशन महत्त्वपूर्ण नाफामा पुग्छ (एजेन्सीको काम बाहेक), मानिसहरूले अतिथि लेखकहरू र सबमिट गरिएको सामग्रीको सन्दर्भमा हामीलाई समान प्रतिक्रिया गर्न सक्दछन्। हामी प्रत्येक हप्ता पाहुनाहरूबाट धेरै पोष्टहरू प्रकाशित गर्दछौं जब हामी विश्वास गर्छौं कि हाम्रा दर्शकहरूले सामग्रीबाट फाइदा लिनेछन्। हामी ती कम्पनीहरू वा व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिदैनौं।
हामी अतिथि लेखकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिदैनौं (तर) किनभने हामीले हाम्रो श्रोताको संख्या बढाउन एक दशकमा लगानी गर्यौं। म हरेक हप्ता मेरो कम्तिमा एक चौथाई समय पिचहरू पढ्ने, कम्पनीहरूसँग कुराकानी गर्ने, प्लेटफर्महरू मूल्या ,्कन गर्ने, पोडकास्टहरू गर्ने, हाम्रो भिडियो प्रोग्राम बढाउने, पुस्तकहरू पढ्ने, कार्यक्रमहरूमा भाग लिन र हाम्रो प्रकाशनलाई समर्थन गर्ने प्लेटफर्महरूको लागि भुक्तानी गर्नेमा लगानी गर्छु। म त्यो समयको लायक हो भनेर सोच्न डराउँछु ... म यसलाई लाखौंमा मूल्य दिन्छु। म त्यो लगानीको साथ मेरो भाँडा तिर्न सक्दिन, या त!
के विल व्हीटनले हफिंगटन पोष्टको बारेमा आफ्नो ब्लग पोष्टको साथ भाडा तिर्न सक्षम भयो? म त्यस्तो विश्वास गर्दिन।
हाम्रो दर्शक मूल्यवान छ। हामी हजारौं घण्टा र प्रत्यक्ष लगानी र प्रमोशन मा हजारौं डलर मा कि पुग्न को लागी भुक्तान गरेको छ। हाम्रो अतिथि लेखकहरु लाई भुक्तानी हाम्रो दर्शकहरु संग उनीहरुको अधिकार निर्माण गर्ने अवसर मा आउँदछ र व्यावसायिक कारणका लागि उनीहरुसंग संलग्न हुन आकर्षित गर्दछ। हामीसँग महान सामग्री लेख्नमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले महसुस गरे अप्रत्यक्ष ती पोष्टहरूबाट राजस्व। त्यसोभए, मैले तिनीहरूलाई सामग्रीको लागि भुक्तान गरेको छैन, जबकि हाम्रा दर्शकहरू छन्
हामी मध्ये जो प्रसिद्ध छैनौं र हाम्रो अधिकार बढाउन र अनलाइन पुग्न कडा परिश्रम गरिरहन्छौं, कसैलाई लगानी गर्न जारी राख्ने दर्शकलाई पुग्न र आकर्षित गर्ने अवसर उत्कृष्ट अवसर हो। मलाई विश्वास छैन कि यो शोषण नै हो ... यो एक पारस्परिक लाभदायक अवसर हो जहाँ फाइदाहरू छलफल गर्न सकिन्छ।
तथ्य यो हो कि पीआर प्रोफेशनलले विल व्हीटनलाई सघाएको थियो। त्यसैले हफपोले उनी जस्ता प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग पैसा खर्च गर्न खर्च गरिरहेको छ। मलाई विश्वास छ कि श्री व्हीटनले एक त्यस्तो सम्झौतामा वार्ता गर्न सक्षम भएको हुन सक्छ जहाँ उसले लाभान्वित हुने थियो - दुबै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा। यहाँ केहि तरिकाहरू छन्:
पुस्तक पदोन्नति - श्री Wheaton एक कुशल लेखक हो। हुनसक्छ उहाँ हफिंगटन पोष्टका विशाल श्रोताहरू बीच आफ्नो पुस्तकको निःशुल्क पदोन्नतिको लागि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। यो केहि कोटीहरू वा शीर्षकहरूमा प्रासंगिक कल-टु-एक्शनको साथ गर्न सकिन्छ वा हफिंग्टन पोष्टले ट्रेडमा भएका पुस्तकहरू समीक्षा गर्ने अनुरोध गरेको पनि हुन सक्छ। यसले केहि धेरै पुस्तक बिक्री गर्न सक्दछ!
कल-टु-एक्शन - श्री व्हीटनले आफ्नो हफिंगटन पोष्ट बायो भित्र कल-टु-एक्शनमा कुराकानी गर्न सक्षम भएका हुन सक्दछ जसले मानिसहरूलाई बोल्ने अवसरहरूको लागि श्री व्हीटन बुक गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। श्री व्हीटन जस्ता सेलिब्रेटी स्टेटस भएकाहरूका लागि बोल्ने एक लाभदायक राजस्व प्रवाह हो।
HuffPo घटनाहरू - हफपोस्ट लाइभको साथ, हफिंगटन पोष्टले पनि धेरै क्षेत्रीय र राष्ट्रिय घटनाहरूलाई बढावा दिन्छ र प्रायोजित गर्दछ। हुनसक्छ श्री व्हीटनले ती कार्यक्रमहरूमा भुक्तानी गरेको सेलिब्रेटी प्रवक्ता हुन सक्ने क्षमताको बारेमा कुराकानी गर्न सक्दछन् - र प्रत्येकसँग पुस्तक हस्ताक्षर पनि थियो।
मुख्य कुरा के हो भने मलाई विश्वास छ श्री व्हीटनले सजिलैसँग पाउन सक्दछ शोषण हफपो जस्ता संस्था धेरै ध्यान, दर्शकहरु, र - अन्ततः - उसको लागि राजस्व ड्राइभ गर्न। र त्यो राजस्व भाँडा तिर्दछ!
म किन नि: शुल्क काम गर्दछु
म लेख्छु मुक्त मेरो साइटमा सामग्री, म लेख्छु मुक्त अन्य साइटहरूका लागि सामग्री जहाँ म उनीहरूको दर्शकलाई संलग्न गर्न चाहन्छु, र म बोल्दछु मुक्त घटनाहरू जुन सम्भावनाहरूसँग म संलग्न हुन चाहन्छु। अवश्य पनि म लेख्छु भुक्तानी हाम्रो ग्राहकहरु को लागी सामग्री र म छु भुक्तानी अन्य घटनाहरुमा बोल्न। कहिलेकाँही हामी यसलाई हाम्रो प्रकाशनमा कभर गर्नको लागि मात्र एउटा राष्ट्रीय कार्यक्रममा जान्छौं। अर्को शब्दहरुमा, म कहिलेकाँही ती घटनाहरुमा दर्शकहरु सम्म पुग्न मात्र भुक्तान गर्छु!
प्रत्येक अवसरको मूल्या evalu्कन गरिन्छ कसरी हामी एक्सपोजरबाट फाइदा लिन सक्छौं र हामी त्यहाँ कसले सञ्जाल लिन सक्छौं। हाम्रो नि: शुल्क काम गर्नुहोस् रणनीति हाम्रो लागि धेरै लाभदायक भएको छ। एक घटनाको खर्च सम्झौताको प्राप्तिमा घाइते भयो हामी एक राष्ट्रिय ब्राण्डको साथमा कहिलै पनि प्राप्त गर्न सकेनौं। त्यो ब्रान्डले अन्य ब्रान्डमा नेतृत्व गर्‍यो। र मा र मा।
त्यसो भए, मलाई ब्लग पोष्टको लागि केहि सय डलर तिर्न सकिन्थ्यो। वा, म दर्शकहरूको साथ केही व्यापार बन्द गर्न सक्दछु र सम्झौतामा हजारौं वा सयौं हजारौं डलर कटौती गर्न सक्दछु। अब तिमीलाई थाहा छ म किन काम गर्छु मुक्त.
वास्तवमा, म मात्र सित्तैमा काम गर्छु - म प्रायः सित्तैंमा काम गर्न भुक्तान गर्छु! डिट्टो पीआरको साथ साझेदारीमा, हामीले लक्षित, प्रासंगिक दर्शकहरू भेट्न चाहन्छौं जसले खोज्नको लागि हामीले ठूलो लगानी गरेका छौं। प्रतिभाशाली टीम डिट्टो पीआर यी अवसरहरू प्रदान गर्न ती प्रकाशनहरूमा मेरो प्रतिभाको पिच गर्दछ। हामी त्यस सम्बन्धका लाभहरू प्राप्त गर्न जारी राख्छौं - ती दर्शकहरूमा कम्पनीहरूका लागि काम गर्दै जुन हामीले पहिले कहिल्यै भेटेका थिएनौं।
के तिमी कहिल्यै बिना पैसा भुक्तान मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने? के तपाईंले कहिल्यै कचरा उठाएर फोहोरमै फाल्नुभएको छ? के तपाईंले कहिल्यै घरबारविहीन व्यक्तिलाई खानाको लागि नगद प्रदान गर्नुभएको छ? तपाईं किन त्यसो गर्नुहुन्छ? हामी हाम्रा सरकारी अधिकारीहरुलाई सडकहरू सफा राख्न र कम भाग्यशालीहरूलाई मद्दत गर्न उल्लेखनीय पैसा तिर्दछौं। हामी अझै यो गर्छौं, यद्यपि यो अनुकम्पापूर्ण छ।
म यस्तो संसारमा बस्न चाहन्न जहाँ मानिसहरू यसको लागि क्षतिपूर्ति नभएसम्म केही गर्दैनन्। एक व्यवसाय मालिक को रूप मा, म तपाईंलाई आश्वस्त गर्न सक्छु कि म व्यवसायबाट बाहिर छु कि यदि यो मेरो रुख थियो। मसँग मेरा धेरै साथीहरू छन् जुन यस जस्तो छोटो अवलोकनको पनि हो, र त्यसपछि म तिनीहरूको निराशा सुन्छु कि उनीहरूको व्यापार कहिल्यै बढदैन। म विश्वास गर्छु मानिसहरूलाई पहिले मद्दत गर्दै मेरो व्यवसाय बढाउनको सबैभन्दा ठूलो साधन भएको छ। र यदि म नि: शुल्क कसैलाई मद्दत गर्दछु, तिनीहरू प्रायः मेरो व्यवसायलाई महान भुक्तान गर्ने ग्राहकहरूको सन्दर्भमा गर्दछन्।
म श्री व्हीटनको नैतिकतामाथि प्रश्न गरिरहेको छैन, तर म यो धारणामा प्रश्न उठाउँछु कि एक नाफामुखी कम्पनीले कसैलाई शोषण गर्दैछ उनीहरूलाई उनीहरूको व्यापारमा प्रतिभा प्रदान गर्न आग्रह गरेर। के श्री व्हीटोनले हफिंग्टन पोस्टमा पैसा छ भन्ने तथ्यलाई दुरुपयोग गर्दै छन् कि उनीहरूले आफ्नो समुदाय निर्माण गर्नमा ठूलो जोखिम र लगानीको बाबजुद? तिनीहरूले भुक्तानी गरेका छन् र तिनीहरूको प्रकाशनको मर्मत र प्रमोशनको लागि भुक्तान गरिरहेछन् - किन यो बेवास्ता गरियो?
म पढ्दैछु हल्का किनारा अहिले जेफ ओल्सन र उनको सादृश्य एक किसानको हो। साइड रोप्नुहोस्, यसलाई खेती गर्नुहोस्, र त्यसपछि लाभहरू कटनी गर्नुहोस्। एक किसानलाई बीउ रोप्ने ज्याला तिर्न मिल्दैन, जब त्यो बीउ सावधानीपूर्वक खेती गरिन्छ र त्यसको परिश्रमको फल दिन्छ भने मात्र उसले भुक्तानी गर्दछ। म सबैलाई बीउ रोक्न प्रोत्साहित गर्दछु जहाँसुकै पनि यसको मतलब हुन्छ ... तपाईंले एकपटक ठूलो बाली उठाउनुहुनेछ!
ब्ल्याबमा हामीलाई सामेल हुनुहोस्
केभिन मुललेट र म यस बिहिबार यस विषयको बारेमा कुरा गर्ने छौं हाम्रो अर्को मार्केटिंग केज म्याचमा ब्ल्ब! मलाई आशा छ कि तपाईं हामीसँग सामेल हुन सक्नुहुन्छ।
टैग: हफिंगटन पोष्टसशुल्क सामग्रीभुक्तान गरिएको सामग्रीWil Wheonon
के तपाईले आफ्नो प्रतिष्ठा प्रबन्ध गर्न अनलाइन समीक्षा निगरानीमा लगानी गर्नु पर्छ?
तपाइँको सामग्री मार्केटिंग कसरी मिक्स गर्ने
टेमा फ्रैंक (@temafrank)
सहमत। यो लेखकमा निर्भर छ कि उनीहरूलाई लाग्छ कि एक्सपोजरले उनीहरूलाई उनीहरूको समय र प्रयासको लागि क्षतिपूर्ति दिन्छ। यो युवा स्वतन्त्र लेखकहरूलाई लेखक क्रेडिट प्राप्त नगरी नि: शुल्क (वा6सेन्ट / शब्दमा, यसको नजिकै) लेख्न भनिएको जस्तो होइन। (र म ती लेखकहरूलाई धेरै कम पारिश्रमिक राख्छु!)
अन्ततः त्यहाँ मूल्य को एक ट्रेडअफ छ र जहाँ त्यो रेखा छ समय र प्रकाशन द्वारा परिवर्तन हुनेछ। मैले एक पेशेवर स्वतन्त्र लेखकको रूपमा काम गर्दा पनि, मैले त्यहाँ पदानुक्रम भएको महसुस गरें: काम जति बोरिंग हुन्छ र यसको लागि कम मान्यता, उच्च तलब। त्यसोभए प्राविधिक म्यानुअल लेख्दा राम्रोसँग तिर्न सकिन्छ। कथा लेख्दा प्रायः केहि पनि भुक्तान हुँदैन तर अझै पनि लेखकको लागि गहिरो सन्तुष्टि हुन सक्छ।
म अझै पनि पैसालाई मूल्यको मापन भएको तर्क गर्नेछु। 6/सेन्ट एक शब्दमा काम गर्ने युवा फ्रीलान्सरहरू वा त्यसको नजिकै रमाईलो गरेर आफ्नो कलालाई सम्मान गर्दै रिजुमे निर्माण गर्दैछन्। म एक युवा पेशेवर हुँदा मैले कुनै पैसा फिर्ता गरेन। जब तपाईं आफ्नो शिल्पमा काम गर्नुहुन्छ र अझ राम्रो बन्नुहुनेछ, तपाईं अधिक मूल्यवान बन्नुहुन्छ। म एउटा अखबारमा काम गर्थें जहाँ डिजाइनरहरूलाई डरलाग्दो व्यवहार गरियो र डरलाग्दो पारिश्रमिक दिइयो, तर अवसरले उनीहरूलाई उनीहरूको रचनात्मकता, उत्पादकता, र प्लेटफर्महरू सिक्न सिकाएको थियो जुन उनीहरूले विद्यालयमा कहिल्यै नदेखेका थिए। ती सीपहरूले उनीहरूलाई कार्यस्थलमा धेरै प्रतिस्पर्धी बनायो र उनीहरूले अविश्वसनीय कामहरू फेला पार्न सक्षम भए।
तपाईंले आज भुक्तान नगर्नुको मतलब यो होइन कि तपाईंले मूल्य निर्माण गरिरहनुभएको छैन र पछि त्यो मूल्यको लागि भुक्तानी गरिनेछ।